Full Emechiela pallet changer Fiber Laser Pipe na mpempe akwụkwọ Metal Cutting Machine - Golden Laser
Kapet, ute & rog Cutting
Full Emechiela pallet changer Fiber Laser Pipe na mpempe akwụkwọ Metal Cutting Machine
Ịcha format: 1.5 × 3m, 1.5 × 6m, 2 × 4m, 2 × 6m, 2,5 × 6m
Pipe ogologo: 6m
Pipe n'obosara: 20mm-200mm
Na ọdabara ihe: Metal mpempe akwụkwọ na anwụrụ
Na ọdabara tube ụdị: Now, square, akụkụ anọ, oval, n'úkwù gburugburu tube, wdg
Laser ike: 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W
Laser isi: nLIGHT / IPG / Raycus Fiber Laser
Ihe onwunwe & Ngwa
Nke a eriri laser ọnwụ igwe nwere a n'ụzọ zuru ezu nchọ echebe cover , ihe mgbanwe table na a tube ọnwụ ngwaọrụ mgbakwunye. Metal efere na akpa nwere ike ebipụ na otu igwe. Ke adianade do, elu-arụmọrụ CNC laser ọnwụ usoro, ụwa-klas nhazi, na iwu siri ike nzukọ usoro hụ na nchekwa, kwụsiri ike, na arụmọrụ na nkenke nke metal laser ọnwụ igwe. Ọ bụghị nanị na ọrụ nchebe, ma ọ na-aka mma ịcha arụmọrụ.
Full nchedo imewe
Full Emechiela pallet changer Fiber Laser Cutting Machine - nchọ ọrụ ohere eme ka gị na ọnwụ usoro nchebe!
Dual Exchange Ọrụ Isiokwu
Na-akara pallet changer, mgbanwe ngwa ngwa, na-azọpụta loading oge.
Automatic sọrọ pallet mpempe akwụkwọ changer. 1500mm × 3000mm (5 '× 10'), 1500mm × 4000mm (5 '× 13'), 1500mm × 6000mm (5 '× 20'), 2000mm × 4000mm (6.5 '× 13'), 2000mm × 6000mm (6.5 ' × 20 '), 2500mm × 6000mm (8.2' × 20 ') arụ ọrụ formats dị.
Otu Machine Dual Iji
Metal mpempe akwụkwọ na tube laser ọnwụ na a otu igwe.
High Damping ndina
The bed bụ abụọ-annealed, vibration ịka nká ọgwụgwọ na Ntụle n'ibu Njirimara, na a na-adịru ndụ ihe karịrị afọ 12.
Automatic Chuck maka tube clamping
The Chuck na-akpaghị aka-eji na clamping ike dị ka tube ụdị, dayameta na mgbidi ọkpụrụkpụ. The mkpa-walled tube anaghị deform na nnukwu tube nwere ike clamped tightly.
Fast ọsọ, ịcha ọsọ 90m / min
N'usoro ọsọ 180R / min
Egwu na-arụ ọrụ NA ANYỊ eriri laser ọnwụ igwe so kpata. Nganga!
laser ike 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W
laser iyi nLIGHT / IPG / Raycus Fiber Laser
laser isi Raytools
Gas ra nrata valvụ SMC
Mpempe akwụkwọ nhazi ebe 1.5m × 3m, 2m × 4m, 2m × 6m, 2.5m × 6m
tube nhazi tube ogologo 3m, 4m, 6m
tube n'obosara 20-300mm
n'ọnọdu ziri ezi ± 0.05mm
Megharịa n'ọnọdu ziri ezi ± 0.03mm
Oke ọnọdụ ọsọ 120m / min
Ịnye ọkụ AC380V 50 / 60Hz
Golden laser - eriri laser ọnwụ usoro usoro
Automatic ukwu Loader tube Laser Cutting Machine
Nrụgide oru Pipe Laser Cutting Machine
Full Emechiela Fiber Laser Cutting Machine na pallet Exchange Isiokwu
Dual Function Fiber Laser Metal mpempe akwụkwọ & tube Cutting Machine
High nkenke Linear Motor Fiber Laser Cutting Machine
Mpempe akwụkwọ metal Ụgha, ngwaike, kitchenware, electronic, akpakanamde akụkụ, mgbasa ozi, craft, ọkụ, mma, ọla, iko, mbuli panel, ngwá ụlọ, ngwaọrụ ahụike, mma akụrụngwa, mmanụ ngagharị, ngosi shelf, oru ubi na oke ohia ígwè, nri ígwè, àkwà mmiri, ụgbọ mmiri, aerospace, Ọdịdị akụkụ, wdg
na ọdabara ihe
Carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara, galvanized mpempe akwụkwọ, alloy, titanium, aluminum, ọla, ọla kọpa na ndị ọzọ metal efere na ọkpọkọ.
Eriri Laser Ịcha Metal mpempe akwụkwọ na tube Samples Ngosi
<< Gụọ ihe banyere eriri laser metal ọnwụ samples
Biko kpọtụrụ Golden Laser n'ihi na ihe nkọwapụta na e kwuru banyere eriri laser ọnwụ igwe . Your omume nke na-esonụ ajụjụ ga-enyere anyị nwere ike ikwu na ndị kasị mma igwe.
1. Olee ụdị metal ihe ị mkpa bee? Metal mpempe akwụkwọ ma ọ bụ tube? Carbon nchara ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ aluminum ma ọ bụ kpaliri nchara ma ọ bụ ọla ma ọ bụ ọla kọpa ...?
2. Ọ bụrụ na ịcha mpempe akwụkwọ metal, ihe bụ ọkpụrụkpụ? Gịnị na-arụ ọrụ size ị chọrọ? Ọ bụrụ na ịcha metal tube ma ọ bụ ọjà, ihe bụ mgbidi ọkpụrụkpụ, dayameta na ogologo nke anwụrụ / tube?
3. Gịnị bụ gị okokụre ngwaahịa? Gịnị bụ gị na ngwa ụlọ ọrụ?
4. Your aha, ụlọ ọrụ aha, email, ekwentị (WhatsApp) na website?
Model Mba: Gf-2040T / gf-2060T
Large Format Fiber Laser Ịcha Machine maka Metal mpempe akwụkwọ na tube
Large format open-ụdị eriri laser ọnwụ igwe na tube ọnwụ mgbakwunye. Mpempe akwụkwọ ọnwụ ebe 2m × 4m, 2m × 6m. Tube ogologo 4m, 6m. Tube n'obosara 20mm ~ 200mm Laser ike 1000W ~ 3000W
Model Mba: Gf-1530T
Dual CNC Fiber Laser mpempe akwụkwọ Metal na tube / Pipe Cutting Machine
Dị n'ihi na ọnwụ dị iche iche diameters nke akpa na nha nke Ibé akwụkwọ na otu igwe. Ịcha tube ogologo 3m, 4m, 6m, dayameta 20-300mm; ọnwụ mpempe akwụkwọ size 1.5 × 3m, 1.5 × 4m, 1.5 × 6m, 2 × 4m, 2 × 6m
Metal mpempe akwụkwọ na tube Fiber Laser Cutting Machine
Integrated imewe na-enye sọrọ ọnwụ ọrụ maka metal mpempe akwụkwọ na tube. Laser ike 1KW ~ 3KW, Ịcha ebe 1.5 × 3m, 1.5 × 4m, 1.5 × 6m, tube ogologo 3m, 4m, 6m, Φ20-200mm
Kapet, ute & rog